Warshadda Waraaqaha - Shiinaha Warshadaha Warshadaha iyo Alaab -qeybiyeyaasha
Waraaqaha waraaqaha waa aalad uu qof walba u baahan yahay, aaladda ugu weyn ee kaalmada u ah ardayda si ay wax u bartaan, iyo qalabka wax lagu qoro waa aruurinta dad badan. Qalabka wax lagu qoro ee soo socda ayaa la heli karaa: qalimaan, masixiye, qalin -qori, kiish qalin, qalin, taliye, buug xusuus -qor ah, qalin -qori, qalin, iftiimin, calaamadeeyaha sabuurada, sumadeyaal joogto ah, biinanka iyo biinbyada, iwm. Agabyadayada xafiisku waxay ka samaysan yihiin waxyaabo tayo sare leh oo aan sun ahayn oo aan ur lahayn. Waxaan habayn karnaa sumcadahaaga, waxaan ku siin karnaa badeecooyin tayo sare leh iyo baakado kala duwan oo leh qiimo tartan. Waxay ku fiican yihiin ciidaha, xafladaha, ardayda, furitaanka dugsiga, hadiyadaha dib ugu noqoshada dugsiga, iwm.
Qalinkii Kartuunka Qalinka ahaa
Qalinka Saliidda ee Squishy & Buugga xusuus -qorka